Blackout Sunetex ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China Blackout Sunetex စက်ရုံ
Sunetex Blackout Roller Blind Fabric သည် 100% polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးထိပ်တန်းအရည်အသွေးနှင့်ကောင်းသောဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်။ သင့်ပြတင်းပေါက်အတွက်အကျယ် 200/230/250/300 cm အမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။ စံသတ်မှတ်ထားသောအရှည်သည်တစ်လိပ်လျှင် ၄၀ မီတာရှိသည်။ မြင့်မားသောခံနိုင်ရည်ရှိသော polyester ထည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အထည်များ၏ကြံ့ခိုင်မှုကိုနိုင်လွန်ထက် ၄ ဆပိုမိုမြင့်မားပြီး viscose ထက်အဆ ၂၀ ပိုစေသည်။ ကောင်းမွန်သော elasticity သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုခိုင်ခံ့မြဲမြံစေရန်အတွန့်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ polyester ထည်သည်အပူဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့်အပူကာကွယ်မှုပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၎င်းတို့သည်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုပြီးနောက်မှို၊ ပိုးမရှိ၊ ပုံပျက်သော၊ အက်ကွဲခြင်းမရှိပါ။
မျက်နှာနှစ်ဆအရောင်ရှိသောကော်သုတ်သည့်နည်းဖြင့်အလင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထည်သည်မီးဘေးကာကွယ်ရေးနှင့်ရေစိုခံဖြစ်ပြီး NFPA701 ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်သည်(ယူအက်စ်အေ)အဆင့် ၄.၅ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အရောင်အစာရှောင်ခြင်း။ အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်း polyester material သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အထည်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကြားတွင်ရေပန်းစားစေသည်။ ကျောင်း၊ ရုံးနှင့်အိမ်အတွက်သင့်တော်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အခမဲ့နမူနာပူဇော်နိုင်ပါတယ်!
အရည်အသွေးမြင့်မားသော roller မျက်မမြင်ထည် Polyester မီးပျက်ခြင်း
Sunetex Blackout Roller Blind Fabric သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကြားတွင်လူကြိုက်အများဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာ 100% polyester ၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုစီသည်လှပသော၊ ရက်ရောစွာနှင့်ဇိမ်ကျသောအသွင်အပြင်ရှိသည်။ သင်တို့မှရွေးချယ်ရန် 200/230/300 ကွဲပြားခြားနားသောအကျယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထည်၏အလေးချိန်သည်တစ်မီတာလျှင် 360gsm ဖြစ်သည်။ အရောင်ကော်နှင့်အမြှုပ်ဖြူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအဖြူရောင်သုတ်ဆေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မီးပျက် ၀ တ်မှုသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ သင်တို့တွင်ဖက်ရှင်အရောင် ၁၀ ခုကျော်ရှိသည်။ ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့၏ရွေးချယ်မှုအတွက်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများကိုသင်မည်သူမဆိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထည်သည်မီးဘေးကာကွယ်ရေးနှင့်ရေစိုခံဖြစ်ပြီး NFPA701 ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်သည်(ယူအက်စ်အေ)ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများကြားတွင်နာမည်ကောင်းရစေသောအဆင့် ၄.၅ ရှိလျှင်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အရောင်အစာရှောင်ခြင်း။ ဒါဟာ''ကျောင်း၊ အိမ်နှင့်ရုံးသုံးပစ္စည်းများအတွက်အလွန်သင့်တော်သည်။ ဘာသင်ပိုမိုအခမဲ့ကမ်းလှမ်းနိုင်ပါတယ်!
မိုးလုံလေလုံရုံးခန်းအတွက်ရုံးအတွက် Window Window မျက်မမြင်များ
ရုံးခန်းအတွက် Sunetex Indoor Window Blinds Bloutout အထည်အလိပ်သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကြာရှည်ခံသည်။ မှိုမရှိ၊ ပိုးလည်းမရှိ။ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဂန္ထဝင်အရောင်မျိုးစုံရှိသည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုစီသည်လှပသော၊ ရက်ရောစွာနှင့်ဇိမ်ကျသောပုံစံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထည်များသည်ရေစိုခံ။ မီးဘေးကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအထည်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးသင့်အတွက်သက်တောင့်သက်သာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားစိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြစ်စေပါ။
Jacquard Roller ကမျက်မမြင်အထည်အလိပ်မီးပျက်ခြင်း
Sunetex Jacquard Roller Blinds Fabric Blackout Series ထုတ်ကုန်များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော 100% polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မတူညီသောအပေါ်ယံနည်းလမ်းများဖြင့်ရက်ကန်းသားထည်များကိုပေးသည်။ မျက်နှာနှစ်ခါဖြင့်ဖုံးအုပ်သည့်နည်းသည် Semi မီးခိုးမြည်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ကျောင်း၊ ရုံးနှင့်အိမ်အတွက်သင့်တော်သည်။ မင်းရဲ့စာတွေကိုကြိုဆိုပါတယ်။
Sunetex Jacquard Roller Blinds Fabric သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကြားတွင်နာမည်ကောင်းရပါသည်။ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အထည်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ တစ်ခုစီသည်လှပသော၊ ရက်ရော။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းများကိုပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အသင်းကောင်း ရှိ၍ ဖောက်သည်တစ် ဦး စီ၏ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံကိုအာရုံစိုက်ပြီးနွေးထွေးသောဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးနှင့်အရောင်ကိုစစ်ဆေးရန်အခမဲ့နမူနာများကိုသင်ပေးနိုင်သည်။
မျက်မှောက်ခေတ် Decoration ကြိတ်စက်မျက်မမြင်ထည်
Sunetex ခေတ်မီအလှဆင်ကြိတ်စက်မျက်မမြင်အထည်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် polyester ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ Foam Colour Coating သည်၎င်းကိုမီးပျက်စေရုံသာမကဖက်ရှင်ကိုလည်းပါထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထည်သည်ရေစိုခံ။ ရေစိုခံသည်။ စံအကျယ် 200cm နှင့် 230cm ဖြစ်ပါတယ်။ စံအလေးချိန်မှာစတုရန်းမီတာလျှင် ၃၃၀ ဂရမ်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အရိပ်ကောင်းသောစွမ်းရည်ရှိပြီးလေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်သည်။ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။
Sunetex Modern Decoration Roller Blind Fabric Blackout သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများအတွက် ၀ ယ်ယူမှုနှုန်းမြင့်မားသည်။ အရည်အသွေးမြင့်သောထည်ဖြင့်၎င်းသည်အကြမ်းခံနိုင်ပြီးသက်တမ်းသည် ၁၀ နှစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏စားသုံးသူများသို့တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည်၊ ၎င်းသည်အလယ်အလတ်ကုန်ကျစရိတ်များကိုချန်လှပ်ရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဘို့, ငါတို့သည်သင်တို့အားအခမဲ့နမူနာပူဇော်နိုင်ပါတယ်
ဒီဇိုင်းအသစ် roller မျက်မမြင်ပိတ်ထည် Blackout
Sunetex Blackout Roller Blind Fabric သည် 100% polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးထိပ်တန်းအရည်အသွေးနှင့်ကောင်းသောဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်။ မျက်နှာမျက်နှာပြင်အရောင်နှစ်မျိုးသုံးသည့်ကော်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အလင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရန်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အရည်အသွေးမြင့်သော polyester ပစ္စည်းသည်ကြာရှည်ခံစေနိုင်သည်၊ မှိုမရှိ၊ ပိုးမပါ၊ ပုံပျက်သော၊ ကြာရှည်အသုံးပြုပြီးနောက်လမ်းကြောင်းမရှိ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၆ နှစ်ကျော်မျက်စိကန်းသောသူများကိုထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အဆင်ပြေစွာတစ်နေရာတည်းတွင် ၀ ယ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားပြီးပြည့်စုံသောအထည်များကိုထောက်ပံ့ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးနမူနာအတွက်အခမဲ့နမူနာများကိုသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။
SuneTex roller မျက်မမြင်ထည်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Polyester နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးသာလွန်ကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းနှင့်သင့်တင့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူတို့သည်အလွန်တာရှည်ခံပြီးသူတို့၏သက်တမ်းသည် ၁၀ နှစ်ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကြားတွင်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကသင့်အားကူညီရန် ၂၄ နာရီဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
၎င်းသည်လေဝင်လေထွက်နှင့်အလင်းရောင်အပေါ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော dip coating နည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားစွမ်းအင်ချွေတာနိုင်စေသည်။ ကျောင်း၊ အိမ်နှင့်ရုံးသုံးပစ္စည်းများအတွက်အလွန်သင့်တော်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်မူလစက်ရုံထောက်ပံ့မှုဖြစ်ပါကသင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပူးပေါင်းပါကသင်အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်ပါသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဘို့, ငါတို့သည်သင်တို့အားအခမဲ့နမူနာပူဇော်နိုင်ပါတယ်
roller မျက်မမြင် Blackout ကုလားကာအထည် 180g
Sunetex Roller Blind Blackout ကုလားကာအထည်သည်အရည်အသွေးကောင်းသော 100% polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောကုန်ကြမ်းများကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ထည်ကိုစွမ်းအားမြင့်မားစွာဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မတူညီသောအပေါ်ယံနည်းလမ်းများဖြင့်ရက်ကန်းသားထည်များကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထည်ကိုသေသပ်စွာဖြတ်တောက်စေသည့် ultrasonic ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာဖြင့် သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အထည်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ တစ်ခုစီသည်လှပသော၊ ရက်ရော။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးသည်အရည်အသွေးနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် ၂၄ နာရီအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး စီ၏ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုအတွေ့အကြုံကိုအာရုံစိုက်ပြီးနွေးထွေးသောဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့အခမဲ့နမူနာပူဇော်နိုင်ပါတယ်!
roller Blind Blackout အထည် 100% polyester
Sunetex Roller Blind Fabric သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော 100% polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပုံမှန်အလေးချိန်သည်စတုရန်းမီတာလျှင် ၁၆၀ ဂရမ်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာမျက်နှာပြင်နှစ်ထပ်ကုတ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အထည်သည်မီးပျက်သည်။ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အထည်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီသည်လှပသော၊ ရက်ရော။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအထည်များဖြင့်မွေးစားခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကြားတွင်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်အားထိန်းချုပ်နိုင်သောအလင်း၊ အတွင်းပိုင်း၊ အရိပ်နှင့်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်သဟဇာတဖြစ်စေသောအလင်းရောင်နှင့်ခရမ်းလွန်ကာကွယ်မှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် MOQ သေးငယ်သည်။ သင်မှာထားသည့်အတိုင်းကြီးကြီး၊ မင်းအတွက်ထုတ်လုပ်မှုများကိုစီစဉ်ပေးမည်။ သင်၏အမှာစာမှာသေးလွန်းလျှင်စိတ်မပူပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်းရဆုံးပစ္စည်းများအတွက်ပုံမှန်ကုန်ပစ္စည်းရှိသည်။ အရည်အသွေးနှင့်အရောင်ကိုစစ်ဆေးရန်အခမဲ့နမူနာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။
roller မျက်မမြင်များ Blackout ထည် Polyester
Sunetex Blackout Roller Blind Fabric သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးအက္ခရာကောင်းသည့် Polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အရည်အသွေးကောင်းပြီးကြာရှည်ခံသည်။ မှိုများနှင့်ပိုးဖလံမရှိပါ။ သင်၏ရွေးချယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဂန္ထဝင်အဖြူနှင့်မီးခိုးရောင်အရောင်များရှိသည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုစီသည်လှပသော၊ ရက်ရောစွာနှင့်ဇိမ်ကျသောပုံစံရှိသည်။
မျက်နှာပြင်နှစ်ထပ်မျက်နှာပြင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည် Sunetex Slubby Yarn Fabric သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည် ၀ ယ်ယူနှုန်းမြင့်ထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အားမိုးလုံလေလုံအလင်းကိုထိန်းညှိရန်သင့်အားကူညီနိုင်ပြီးသင့်အတွက်ပိုမိုသက်သောင့်သက်သာရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထည်အားလုံးအတွက် ၁၀ နှစ်အာမခံပါသည်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကြားတွင်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖြစ်, ငါတို့သည်သင်တို့အားအခမဲ့နမူနာပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
Slubby ကြိုးမျက်မမြင်ထည်အမြှုပ်အဖြူရောင် Coating
Sunetex Slubby ကြိုးမျက်မမြင်အထည်သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသော polyester မှောင်မိုက်ပိတ်သောအထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အမြှုပ်အဖြူရောင်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, ထည်မီးခိုးငွေ့စေသည်။ အဆင့်မြင့်စက်များနှင့်နည်းပညာများက၎င်းကိုသေသပ်စွာဖြတ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်မည်သည့်အရောင်နှင့်မဆိုကိုက်ညီနိုင်သည်။ သင့်ပြတင်းပေါက်အတွက်အကျယ် 200/230/250/300 စင်တီမီတာအကျယ်ရှိသည်။ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အထည်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ မည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအထည်များဖြင့်မွေးစားခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားစိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြစ်စေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်မှာ ၀ ယ်သူ၏ ၀ င်းဒိုးအရွယ်အစားလိုအပ်ချက်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအသင့်တော်ဆုံးကုလားကာဖြေရှင်းချက်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးသောဖက်ရှင်ဖြေရှင်းချက်ဖြင့်သင့်ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိဖောက်သည်များအတွက်တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။
Superior Plain မျက်မမြင်ထည် Blackout
Sunetex Superior Plain Blind Fabric သည် ၁၀၀% Polyester ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးခွန်အားမြင့်မားသည်။ ၎င်းသည်အရိပ်ကောင်းသောစွမ်းရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များကိုစစ်ထုတ်ပေးနိုင်သည်၊ သင်၏ရုံးခန်းကိုအလုပ်လုပ်ရန်အဆင်ပြေစေသည်။ လေကောင်းလေလေကောင်းလေသန့်ပဲ။ ငွေရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောနည်းစနစ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအဆင့်မြင့်သည်။ နှင့်ငါတို့ထုတ်ကုန်အလွန်ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်အကြမ်းခံဖြစ်ကြသည်။ သင့်ပြတင်းပေါက်အတွက်အကျယ် 200/230/250/300 cm အမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။ စံသတ်မှတ်ထားသောအရှည်သည်တစ်လိပ်လျှင် ၄၀ မီတာရှိသည်။ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၆ နှစ်ကျော်မျက်စိကန်းသောသူများကိုထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့မျက်စိကန်းသောအထည်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းရောင်းချသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အဆင်ပြေစွာတစ်နေရာတည်းတွင် ၀ ယ်ယူရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဘဝကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အကောင်းဆုံးစုံလင်သောမျက်စိကန်းသောအထည်များကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးနမူနာအတွက်အခမဲ့နမူနာများကိုသင်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။